घरमा अचानक कमिला देखिनु कस्तो संकेत ? तपाईको घरमा पनि छन् की ? – Jagaran Nepal
घरमा कमिला आउने जाने गरेको देख्नुभएको छ भने यसले केही संकेत गर्न खोजेको हुनसक्छ । ज्योतिषका अनुसार घरमा कमिला आउनु भनेको जीवनमा हुने परिवर्तनको संकेत हो ।
यसैगरी सपनामा कमिला देख्दा धन लाभ हुने बताईन्छ । तर अधिक मात्रामा कमिला देखे जीवनमा चिन्ता बढ्ने संकेत गरेको मानिन्छ । घरमा आएको कमिलालाई मार्नु दुर्भाग्य हुने समेत ज्योतिषमा बताईएको छ।